"Uzibulale ngamaphilisi ecikwa ukucetshwa" - Ilanga News
Home Izindaba “Uzibulale ngamaphilisi ecikwa ukucetshwa”
Kuthiwa indaba isuswe ukuthi uvumele abangani bakha izithelo ezitshalwe egcekeni lakubo
USHIYE unina nesilonda enhliziyweni umfanyana waseMachobeni, eNanda, okuthiwa ucasulwe wukuthi ucetshwe ngumfowabo omncane kuninakhulu ukuthi uphe abangani bakhe izithelo ezitshalwe egcekeni lakubo engazicelanga, waphuza inqwaba yamaphilisi, wazibulala ngo-Lwesibili.
Kunzima ngisho ukukhuluma kuNkz Ntombenhle Mkhize (36) ngento emehlele, indodana yakhe, uThembinkosi Mkhize (16) izibulala ngoba icetshwe ngumfowabo oneminyaka ewu-10 ubudala.
UNkz Mkhize uthi indaba iqale ngoMsombuluko ntambama ngesi-khathi indodana yakhe itshela uninakhulu ukuthi umfowabo uvu-mele abangani bakhe ukuba bakhe umalikwata esihlahleni sakubo bengawucelile, bamkhokhela ishumi ngalokho.
Uthi umufi uthukuthele wagana unwabu, yize engathethiswanga ngesenzo sakhe. NgoLwesibili ekuseni kubikwa ukuthi uxoxele umngani wakhe wakwamakhelwane ukuthi uzophuza amaphilisi azibulale ngenxa yento eyenziwe yingane yakubo.
UNkz Mkhize uthi umngani kaThembinkosi ubezitshela ukuthi uyazintelela nje uma esho njalo ngoba umphendule ngokuthi uma eke wenza into engasile kanjalo, ngeke alubhade emngcwabeni wakhe.
Uthi uqede ukusho lokho kumngani wakhe, wahamba wayophuza amaphilisi ezibulala. Ukwenze lokhu unina ekhona kodwa elele phansi ngenxa yokuxinwa wumkhuhlane.
“Uphuze amaphilisi engane kadadewethu egula ngekhanda. Ngitshelwe yizingane ukuthi ulele embhedeni akavuki, uma zimemeza akasabeli.
“Kube yisikhathi esincane izingane zingitshele lokho, ngambona esevukile waphuma ngomnyango eya kumngani wakhe kwamakhelwane. Ngithole ukuthi ufike wamxoxela ukuthi usezofa ngoba usewaphuzile amaphilisi okuzibulala, wavalelisa kuyena.
“Usuke kumngani wakhe wabuyela embhedeni walala. Ngesikha-thi efika ngizitshele ukuthi uyolala ekameleni, kangizange ngibone noma ngisole ukuthi kukhona umonakalo asewenzile,” kusho uNkz Mkhize.
Uthi nomngani wendodana yakhe akazange akucabange ukuthi ayobabikela ukuthi indodana yakhe isiphuze amaphilisi ngoba ubezitshela ukuthi iyadlala.
Eqhubeka, uthi kuze kwashaya u-15h00 indodana yakhe ilele, naye enganakile.
“Kuthe uma kubuya udadewabo omdala esikoleni, ngamcela uku-ba angibhekele yena ekamelweni. Umfice elele, wathi uma ezama ukumvusa, wanganyakaza.
“Ubuye wazongibikela ngaphuthuma khona, ngafica indodana yami sekumhlophe umlomo, ingasanyakazi. Sizamile ukuyivusa, yangavuka. Ngizame imoto ezoyiphuthumisa emtholampilo okuthe uma sifika khona basitshela ukuthi isishonile,” kusho yena.
Uthi ufe olwembiza ngendodana yakhe ebiwusizo kuyena. Uveze ukuthi njengoba ebelele ngenxa yomkhuhlane, ubenakekelwa yiyona ngakho konke akudingayo, imhlanzela ngisho indlu.
“Ngiyasola ukuthi kukhona okunye akuphuzile umfana wami, okuyikho okusheshe kwambulala ngoba kangikholwa ukuthi ama-philisi abengambulala ngokushesha okungaka.
“Siwumndeni sisadidekile ukuthi yini le engaka emenze waze wanquma ukuzibulala ngoba ubejwayele ukuxabana nomfowabo kodwa ubengakaze aze acabange ukuzibulala.
“Umoya wami uphuke kakhulu ngento engehlele, kunzima noku-thi ngikhulume,” kusho uNkz Mkhize.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokushona kwengane.
Previous articleUbuya ekushayeleni amatekisi uClive
Next articleBancoma iqhaza likaKhuzani